Indlela yokukhetha izicathulo zomntwana 9-12 iinyanga. Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kumntwana
Abantwana Iifashoni zabantwana
Izikhwele kwisinyathelo sokuqala: indlela yokukhetha izicathulo zokuqala zentsana yakho
Isidingo esiqakathekileyo sokhuseleko lwezantsana zivela xa sele esele athathe amanyathelo akhe okuqala. Kuze kube ngeli xesha, iinyawo ezincinci zinokugqutywa kuzo zonke iintlobo ze-slippers, booties and socks. Akuyimfuneko kancinane kwintsana, ubuninzi kumama. Ndikhokelwa ngumnqweno wokugxila kwiintsuku zokuqala zokuphila into efanelekileyo yokulungelelanisa okanye ukuzithokozisa phakathi kwabantu abakujikelezileyo, oomama banamhlanje banxiba abantwana babo ngendlela ephathekayo nangendlela ephathekayo. Kodwa ngokukhawuleza xa umntwana ekhula, kukhethwa ukukhethwa kwezicathulo, ukugcina imithetho ethile.
Xa kuthengwa izicathulo zokuqala
Isibonakaliso sokuba lixesha lokufihla amaqhekeza amancinci e-closet kwaye uhambe izicathulo zokuqala zomntwana ziya kuba zizame ukuma ezinyaweni zakhe. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka phakathi kweenyanga ezili-9 neye-12. Izicathulo, izihlangu, izicathulo okanye amabhuthi - umzekelo kuxhomekeke kwixesha lonyaka kunye nemimoya ngaphandle kwewindow. Elinye ibhola leembatho liwanele ukuhamba endleleni. Kodwa kuyafaneleka ukunyamekela oko inyana iya kuhamba kuyo. Iisokisi kunye neebhokhwe zinokugqithwa ngumntwana oza kumela emilenzeni. Kodwa kubantwana abazimeleyo njengezikhumba zasekhaya ngokokuqala ngqa kungcono ukhethe izicathulo zesiqhelo zesitalato. Baya kukhusela imilenze ephosakeleyo imonakalo.
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kumntwana wakho
Ukubukeka, izicathulo zezingane kufuneka zikholise umama zingaphantsi kwezicathulo zakhe. Nangona kunjalo, isibheno sangaphandle asikude kwizinto ezisisiseko, oko kufuneka uhlawule xa uthengela izihlangu zokuqala zomntwana wakho. Kukho inani leeparitha eziphambili apho impilo nempilo yengane incike khona. Ngaloo ndlela:
Iphela kufuneka ibe yincinci kwaye iguquke.
Iingqayi kufuneka zibe nesithende esincinci (5-10 mm). Kuya kunceda ukukhusela ukuwa, apho unokufumana ukulimala kwentloko.
Ukulungiswa kakuhle kwesithende oyifunayo umqolo onzima, oya kusindisa umlenze omncinci ukususwa.
Iseshoni kufuneka isuswe ukwenzela ukuba, ukuba kuyimfuneko, inokuthi ithathe indawo yesikhombisi ngefestile.
Iisokisi zeembadada akumele zenzeke. Umlenze kufuneka uhlawule ngokuchanekileyo.
Ngaphakathi kweembadada akufuneki kubekho izibilini eziphezulu, ezibonisa umgangatho ombi kwaye unokusihlamba unyawo lwakho.
Izicathulo "zokukhula" zingathengwa, kodwa apha akufuneki ukuba zigqoke ngaphambi kwexesha, umlenze awufanele ungene ngaphakathi.
Ngaba ndifuna izicathulo zamathambo ukuze zikhusele iinyawo eziphantsi?
Ingcamango "yezicathulo zamathambo" akufanele isetyenziswe kubo bonke abantwana abaphilileyo. Izicathulo ezinjalo zixotshiwe ukuze zenzele umyalelo ogqirha kwaye akukho nanye ityala lokuthintela iinyawo ezintle. Zonke iintsana zizalwe ngeenyawo ezinqamlekileyo, ezakhiweyo malunga nexesha eli-12. Ngokuqhelekileyo ama-orthopedic abizwa ngokuba yizona ziqhelo eziqhelekileyo kunye nenkxaso yesikhombisi, ehlangabezana nazo zonke iimfuno.
Abazali abancinci bafanele baqonde ukuba ukubonakala kweenyawo ezinqabileyo akuxhomekeke kukhethwa kwezicathulo. Inokuthi ithintelwe ngoncedo lwama-insteps, uhamba kwiindawo ezingalinganiyo (isanti, utshani ...) kunye nezifundo kumathambo omzimba.
Imisimbozo yamantombazana kuNyaka omtsha 2017 ngezandla zabo kwiifutshane ezimfutshane, eziphakathi kunye nezinde - iifoto kunye namavidiyo
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo kubantwana?
Umncedisi womncedisi: Indleko yonyaka omtsha we-snowman ngezandla zakho
Izitiketi zezingane eziphathekayo 2016: ukujonga ngokubanzi imifanekiso yezitayela kunye nemibala
I-chic yezemidlalo: Iimoto eziphambili ze-sweats ze-2016
Umsila omnandi "I-Whisky"
Indlela yokuphepha iingxabano kwintsapho?
Impembelelo enkulu kakhulu yabasetyhini ngesini
Kutheni umhlobo onobuhlungu kunye nendlela yokuyivuselela?
Indlela yokuzikhusela kumkhuhlane eofisi
Iimigaqo zeSaydiac Signs
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - ibhinqa-ingonyama - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Umzala wakhe kunye nenkukhu nemifuno
Ikiti yokuncedisa okokuqala ngomntwana endleleni, elwandle, kwikhaya
Kuthiwani ukuba umyeni wakho ushushu?
Indlela yokwenza imfashini kunye nesitayela ngokuhlobisa umthi weKrismesi: Iingcebiso eziphezulu ezine
Geiger kunye naye abuyele
Umtshato kunye nokukhulelwa: Ulonwabo obini
Isikhokelo Esikhawulezayo soTyala lomlomo
UTimati noKirikorov bathatha i-clip yokuqala